Wonke umuntu okungenani kanye empilweni yakhe wahlangana elithi "igazi bilirubin" ozinikela ukuhlolwa e emtholampilo noma esibhedlela. Kodwa bambalwa abantu ukuthi mkhulu ukubaluleka le nkomba.
Bilirubin iyona sombala eyinhloko, cholic, umbala ophuzi-obomvu, okubangelwa ukubhidlika elithwala umoya-mpilo. Lokhu kunquma umbala nemihuzuko ophuzi ngosuku lwesithathu futhi isikhumba jaundice.
bilirubin Ubude iqukethe amafraktjhini ezimbili - nenkhulumombiko, ngamunye ephethe incazelo yalo. Lapho kubhujiswa elithwala umoya-mpilo, myoglobin, nezinye amaprotheni ekhethekile igazi reticuloendothelial amaseli ezikhishwe ingxenyenamba ngokungaqondile noma sikhululekile, okuyinto ke ingena sesibindi sibopha ukuthi glucuronic acid, abe ingxenyenamba ngqo noma okuhlobene.
Amanani Okuvamile (i Iendrasheku): bilirubin Imininingwane - 8,5-20,5 mmol / l, oqondile - 0-5,1 Mol / l. Ngo abesifazane abakhulelwe yokuthathu yesithathu futhi izinsana ezinyangeni zokuqala zokuphila kunokwanda bokuphila e sombala.
bilirubin ezingeni kunqunywa impela nje. Ukuzila Ukudla (kuka emva 8 amahora emva esidlweni sokugcina), isiguli eletha igazi emthanjeni. Kuyadingeka ukuba senqabe imithi, utshwala, ukudla okunamafutha, kusukela ukuzivocavoca. Esifundweni we diazoreaktiv igazi wanezela, okwathi ngemva kwalokho ingxenyenamba lesibopho okukhulunywa ngaso pink - impendulo eqondile. A ingxenyenamba khulula akasabeli, ngakho tube ingezwe i kuphela organic, ukunika amandla ikhishwe - kuyinto ukusabela engesobala. Ukuhlolwa kwegazi ngoba bilirubin uzolunga usuku.
Uma igazi bilirubin ezingeni mkhulu kunezinhliziyo 27 mmol / l, jaundice (hyperbilirubinemia), esizibonakalisa isikhumba yellowness, nolwelwesi lwamafinyila kanye sclera. Ngaphezu kwalokho, iziguli zingase zibhekane palpitations, imfiva, umchamo onombala. Kungase kube izikhalazo mayelana kabi kwesokunxele quadrant engenhla, ubuhlungu bekhanda, ubuthakathaka jikelele.
bilirubin ephakeme egazini kungahle kubangelwe esinye sezizathu ezinkulu ezilandelayo:
Uma siyabhubha ukugeleza Bile (isib, cholelithiasis).
Uma ebucayini uketshezi of bilirubin conjugated phakathi Bile.
Uma une isifo sesibindi, ezithinta umzimba bilirubin.
Uma anenombolo enganele enzyme labelwe obhekene ukuguquka bilirubin, noma umsebenzi wabo kahle.
Uma inombolo kwamangqamuzana egazi abomvu idlula izinga ezibolile (isib anaemia hemolytic).
Kukhona 3 lamadigri kobukhulu jaundice:
Khanyisa - bilirubin egazini ingeqi 85 mmol / l.
Okulingene - 86-169 mmol / l.
Heavy - ezingaphezu kuka-170 micromol / l.
Lapho bilirubin is amazinga ukwelashwa udokotela aphakeme! Okokuqala, it kuzoncika imbangela zokugula kwembulwe. Isigaba sokuqala sale kwelashwa Ukudla. Isiguli kufanele ususe ngokuphelele ukudla, "ezisinda" kangaka isibindi: okugazingiwe, efakwé usawoti, ngibhema, amafutha, utshwala, okubabayo, njll Kuyadingeka ukuba ngilinganisele usawoti, ikhofi kanye nesinkwa. Kulokhu, ekudleni kumele lenyuke uketshezi eyanele kanye wokudla iphalishi.
Amakhambi chamomile efanelekayo, wort iSt John sika, motherwort, peppermint, rose okhalweni, amaqabunga birch. Isetshenziswa eceleni noma Izingxube ngesimo infusions emanzini. Ziyakwazi ngaphezu ukuphathwa eyisisekelo.
Kuye zokugula kubangela Udokotela angase anikeze isiguli eziningi ukuthaka imithi, ekugqugquzeleni ukuzinza of bilirubin ezingeni, ukusekela isibindi, wamathumbu ukuhlanzwa kanye nokwenza ngcono izakhiwo okuvikela umzimba.
Bilirubin egazini kuyinto kuyinkomba ebaluleke lekutfola eziningi izifo wokugaya ukudla. Kuyasiza ukubona kahle kwezinso, ngisho noma kungekho zimpawu, ngakho yeluhlolo kwanoma iyiphi nesineke.
Njengoba menopause iqala futhi kanjani amathuba okuba asinde kulokho
I-unth-vertebral arthrosis: izimbangela, izimpawu nezindlela zokwelashwa